Sidee amarrada / geeddi-socodka loogu dirayaa asalka | Laga soo bilaabo Linux
Sida loogu diro amarrada / geeddi-socodka asalka
Marar badan markaan ka shaqeyno terminal waxaan dooneynaa inaan fulino amar, laakiin markaa si aan u awoodno inaan xirno terminal iyo in waxa aan fulineyno MA XIRO, tusaale ahaan, waxaan ku fulinaa qoraal qoraal ah terminalka ka dibna xira terminal laakiin in qoraalka ayaa sii wadaya fulinta ... sidee lagu gaaraa tan?
Si tan loo gaaro waa inaan si fudud u dhigno & dhamaadka khadka, tusaale ahaan, waxaan haysannaa qoraal la yiraahdo wifi-log.sh oo aan ku fulinno kuna xafidno salka wuxuu noqon lahaa:
Halkan ka daawo shaashadda:
Halkan waxaan si cad ugu aragnaa kadib markaan fulinno qadka kore wax kale oo soo muuqdaa majiraan, marka laga reebo  29675 Tan macnaheedu muxuu yahay?
29675 waa PID (nambarka waxqabadka) ee qoraalka aan fulino, taasi waa, haddii aan rabno inaan dilno qoraalka oo aan joojino fulinta waxaan si fudud u dhignaa:
Iyo voila, way joogsatay orodka.
Waxaan ula jeedaa iyo Marka la soo koobo, si aad ugu dirto geedi socod (amar, amarro dhowr ah ama qoraal) xagga dambe (ama gadaal) waa inaan dhignaa dhamaadka safka kadibna riixnaa Ku qor
Tani maahan wax cusub, oo ka fog laakiin… marwalba way wanaagsan tahay in la caddeeyo, sidoo kale, qoraalkani wuxuu iigu adeegi doonaa mid kale oo aan dhawaan soo daabici doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Sida loogu diro amarrada / geeddi-socodka asalka
Waad ku mahadsantahay caarada, faahfaahinta yar yar ee waxtarka badan leh.
Mawduuca Ka-baxsan: Ciidaha wanaagsan ee qof walba.
Mahadsanid sidoo kale
Ma dhaawici doonto in laga hadlo amarrada fg y bg; gaar ahaan tan dambe, si loogu diro geedi socod xagga hore iyo / ama sooyaalkii hore.
Aad u faa iido badan hadii aan ilaawno inaan ku darno & kadib amarada 😉
Sidoo kale waa inaad ka hadashaa sugida si aad u ballaariso mowduuca wax yar, waxaa loo isticmaalaa mararka qaarkood $ $ PID iyo $ PID ama diida tusaale ahaan si loo beddelo qolofka geeddi-socodka:
Ku jawaab atheyus
Mahad aad u faa'iido badan, waan ogaa shaashadda inaan ku daydo daaqadaha waxaanan u adeegsaday si qallafsan wakhti hore. Waxaan ku darayaa casharrada aad isticmaasho waqtigaas haddii ay dhacdo in qof xiiseynayo.
Sidoo kale waa ku habboon tahay in la isticmaalo amarka 'SCREEN', laakiin horeyba waa wax ka sii horumarsan.
Kuwa shaashadda aadka u horumarsan, iskuday byobu, waa waxa aan inta badan isticmaalo waana mid aad ugu raaxeysanaysa marka lagu daro inay ku siiso macluumaad waxtar leh bar-xaaladda.
PS Waxaan ka raali gelinayaa qoraalka ka yimid Linux (caajisnimada ah inaan dib u soo kicin ka dib markii la ciyaaray GRID2)
Waan ka xumahay, waxaan ula jeeday "qoraal la'aan"
Waxaad wax ka qori kartaa meeshaad rabto, saaxiib, taas ayaa lagu ixtiraamaa halkan.
Mid kasta Qallooca qalinka cafi, maadaama aysan sida caadiga ahayn Disqus.
Always Marwalba waan sameyn jiray process nohup process &
Oo maxaa dhacaya haddii aad horey u laheyd geedi socod socod oo aad go'aansato inaad u wareejiso asalka?
Hagaag, Ctrl + z wayna joogsatay, shaqooyinka waxaad ka arki kartaa lambarka ay leedahay iyo bg waxaad u dhigaysaa inuu ku ordo gadaal.
 + Joojiyay / usr / bin / mc -P "$ MC_PWD_FILE" "$ @"
Waxaan cusbooneysiinayaa Archlinux waxaanan u beddelay 2 diyaaradood (pacman -Syu), iyadoo ctrl + z ay horayba kuu sheegayso lambarka ay haysato, hadda haddaan doonayo inay dib ugu laabato aagga hore, waa maxay amarka la adeegsaday?, Mise waad leedahay in la dilo hawsha oo dib loogu celiyo.
oo leh amarka `` fg` 🙂
ctrl-z # ayaa joojiya
bg # u dir asalka socda
fg # dib ayey ugu soo celineysaa hore 🙂
fg ama% ku noqoshada howlaha socda ee asalka ah:
Lovers of terminal oo ku shaqeynaya asalka waxay u badan tahay inay ka heli doonaan qodobbada soo socda kuwo waxtar leh:
Haye sidee tahay
Waxaan tijaabinayaa inaan daamurka ku wado gadaashiisa waxayna ku dhamaanaysaa marka hore.
Adoo adeegsanaya khadadka amarka tar cvf backup.tar / var &.
Haddii aad xoogaa caawimaad ah i siin lahayd. Waxaan marhore iskudayay inaan tuubo, oo leh qoraal iyo n waan helaa.
Si qoto dheer loogu barto VLC
Audacious: Muusig leh qaab